शिक्षा :इञ्जिनीयरिङ भविष्यको नक्सा | गृहपृष्ठ
Home शिक्षा शिक्षा :इञ्जिनीयरिङ भविष्यको नक्सा
इञ्जिनीयरिङ हरेक कामलाई प्रविधिको प्रयोगमार्फत सरलीकरण गर्ने पेशा हो । सम्पूर्ण भौतिक विकासको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि डिजाइन र सुपरिवेक्षण गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका इञ्जिनीयरको हुन्छ । विश्वमा आममानिसले प्रयोग गर्ने सबैजसो आधुनिक भौतिक वस्तुको डिजाइन तिनै इञ्जिनीयरले गरेका हुन् । प्रविधिको अधिकतम प्रयोगबाट पूर्वीजापानदेखि पश्चिम अमेरिकासम्मले आर्थिक–सामाजिक रूपमा निकै फराकिलो फड्को मारिसकेका छन् ।
नेपालमा अझै पनि प्रविधिको समुचित विकास हुन सकेको छैन । यद्यपि, नेपाली इञ्जिनीयरहरूको विश्वव्यापी सफलता भने वर्णनयोग्य छ । सानो मुलुक, कमजोर पूर्वाधार र न्यून प्रतिस्पर्धाबाट उत्पादित जनशक्तिले अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा यति ठूलो सफलता पाउनुलाई नेपाली बुद्धिको करामत देख्छन् इञ्जिनीयरिङका एकजना प्राध्यपक प्रशान्त घिमिरे । उनी भन्छन्, ‘इञ्जिनीयरिङमा प्रतिष्ठा र आर्थिक प्रतिफल पनि राम्रो भएकाले भविष्य उज्ज्वल छ ।’
यस्तै उज्ज्वल भविष्यको सम्भावना देखेरै उक्त विधामा नेपाली विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ । यसैको एउटा उदाहरण हुन्, सीता बराल । उनी अहिले हिमालयन इन्ष्टिच्युट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, बानेश्वरमा बीईको अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत छिन् । प्रतिष्ठा र अवसरका लागि इञ्जिनीयरिङ पढनेहरूको सङ्ख्या अहिले नेपालमा बढिरहेको छ । नेपाल इञ्जिनीयर्स एशोसिएशनले नेपालमा अहिले वार्षिक साढे ३ हजारको हाराहारीमा इञ्जिनीयरहरू उत्पादन भइरहेको बताएको छ । नेपाल इञ्जिनीयरिङ काउन्सिलमा करीब १९ हजार इञ्जिनीयर दर्ता भएका छन् भने ११ हजारभन्दा बढी इञ्जिनीयर एशोसिएशनमा आबद्ध रहेको एशोसिएशनका महासचिव अनुराधा शर्माले बताइन् । विगत ३÷४ वर्षको अवधिमा इञ्जिनीयरिङ अध्यापनका लागि धेरै कलेज खुलेका छन् ।
नेपालमा कार्यरत इञ्जिनीयरहरूले पनि राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । तर, नयाँ प्रविधिको उपयोग, उच्चशिक्षाको अवसर र आकर्षक पारिश्रमिकका कारण विदेशिने इञ्जिनीयरहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन । अहिले ४÷५ हजार इञ्जिनीयर देशबाहिर रहेको उनको अनुमान छ । ‘स्वदेश होस् वा विदेश इञ्जिनीयरिङ अध्ययन गरेका विद्यार्थी बेरोजगार हुँदैनन्,’ शर्माले भनिन् । इञ्जिनीयरहरूलाई देश विकासमा लाग्ने वातावरण सृजना गर्न सके देशको मुहार फेरिने एडभान्स कलेज अफ इञ्जिनीयरिङ एण्ड म्यानेजमेण्टका सहप्राचार्य प्रशान्त घिमिरे बताउँछन् । बजारको मागअनुसार इञ्जिनीयरिङअन्तर्गतका विभिन्न विषय छनोटमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
इञ्जिनीयरिङ अध्ययनपछि रोजगारीका लागि स्वदेश तथा विदेश दुवैतिर समान अवसर रहेको घिमिरेको भनाइ छ । इञ्जिनीयरिङको पाठ्यक्रम र अध्यापनको स्तर नेपालका कलेजको पनि विश्वस्तरकै रहेको उनी बताउँछन् । ‘नेपाली विद्यार्थीको ‘कुशाग्रता’ पनि कम छैन,’ उनले भने, ‘विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा पनि कतिपय नेपाली विद्यार्थीले उत्कृष्टता हासिल गरेका छन् ।’ यस्तै नेपाली इञ्जिनीयरहरू कम क्षमतावान् नरहेको इञ्जिनीयरिङ कलेजहरूको भनाइ छ ।
इञ्जिनीयरिङ अध्ययनका लागि निजी कलेजमा रू. ६ लाखभन्दा बढी शुल्क लाग्ने भएकाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न कठिन भएको छ । तर, यस क्षेत्रका विद्यार्थीले रचनात्मक काम गर्ने भएकाले आफै पनि आत्मनिर्भर हुन सक्ने कलेजहरूको भनाइ छ । नेपालमा अध्ययन हुने धेरैजसो विषयमा सिभिल इञ्जिनीयरिङ, कम्प्युटर इञ्जिनीयरिङ, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनीयरिङ र इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इञ्जिनीयरिङ रहेका छन् । धेरैजसो विद्यार्थी गणितीय विषयमा धेरै असफल हुने गर्छन् ।
स्कूल र प्लस टू तहमा धेरै मेहनत नगरेकालाई माथिल्लो तहमा गाह्रो हुने घिमिरेले बताए । नेपालमा सबैभन्दा पहिले पुल्चोक इञ्जिनीयरिङ क्याम्पसले बीई कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । यसले सन् १९८४ सालदेखि अध्यापन शुरू गरेको हो । पहिलो सत्रमै ४८ जना विद्यार्थी भर्ना भई अध्ययन गरेका थिए । रसियाबाट आर्किटेक्चरमा विद्यावारिधि गरेका प्राध्यापक डा. हिक्मतराज जोशी भन्छन्, ‘त्यसबेला इञ्जिनीयरले काम पाउन निकै गाह्रो थियो । त्यतिखेर अहिलेजस्तो यति धेरै कलकारखाना र उद्योगको विकास पनि भएको थिएन ।’ अहिले ३३ ओटा इञ्जिनीयर कलेजले बीई अध्यापन गराइरहेका छन् । पुल्चोक क्याम्पस इञ्जिनीयर उत्पादनमा एशियाकै उत्कृष्टमध्ये एक रहेको जोशी बताउँछन् । यहाँ अध्ययन गरेका विद्यार्थीको समाजमा छुट्टै प्रतिष्ठा हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
इञ्जिनीयरिङ अध्ययन गरेका विद्यार्थीको अवसर अरू विषयको भन्दा फराकिलो रहेको छ । प्रत्येक कार्यालय, कलकारखाना एवम् उद्योगमा एउटा इञ्जिनीयरको आवश्यकता हुने गर्छ । विभिन्न बाटो, पुल निर्माण र भवन बनाउन पनि इञ्जिनीयरहरूको नै आवश्यकता हुन्छ । यो विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीमा नयाँ व्यवसाय सृजना गर्ने आँट पनि हुन्छ । साथै, इञ्जिनीयरिङ अध्ययन गरेका कोही पनि विद्यार्थी बेरोजगार नभएको सम्बद्ध कलेज सञ्चालकहरू बताउँछन् । अहिले पनि इञ्जिनीयरिङ कलेजहरूमा रहेको कोटाभन्दा धेरै विद्यार्थीले अध्ययन गर्न इच्छा देखाइरहेका छन् ।